Nzira yekudzivirira sei imba kubva kunotonhora munguva yechando? | Green Renewables
Nzira yekudzivirira sei imba kubva kunotonhora munguva yechando?
pochoky | | Kumba Economics
Nguva dzose nguva yechando inosvika, nguva yekutonhora uye kuderera kwekushisa inosvika. Chimwe chinhu chinoreva kuchinja kwemaitiro evanhu mukati nekunze kwemba. Takazobva pakuva pamaterrace tichiona movie pasofa. Uye chaizvo heino kit yemubvunzo, kubvira pane dzimwe nguva dzatisingawane tembiricha chaiyo yekuchengeta imba ichidziya. Nechikonzero ichi, tichakupa mamwe matipi aunofanirwa kufunga nezvawo kuti uchengetedze imba yako iri kure nekutonhora panguva ino.
Chinhu chekutanga chinouya mumusoro ndechekuti zvinhu zvakavakwa nazvo imba. Nekudaro, iyo insulation yemasirin'i uye madziro nezvinhu zvakasiyana senge cork, recycled donje, furo rekupfapfaidza uye kunyange fiberglass zvinotora zvakakosha.
Imwe pfungwa inokosha ndeye mahwindo. Kudzivirira kutonhora kupinda mukati mavo, zvinodikanwa kuti mahwindo emhando yepamusoro. Zvikasadaro, zvimwe zvinhu zvaizofanira kushandiswa. Semuenzaniso, isa silicone kutenderedza hwindo furemu kudzivirira kupinda kwechando kana kuisa furo pakati pehwindo pacharo uye madziro echivako kuti avhare makatsemuka.
Iwe unofanirwawo kuvhara slot iyo mabhokisi emapofu ane insulating tepi nokuti, kana zvisina kudaro, mhepo yaizopinda sekunge pasina mangwana.
Zvimwe zvinhu zvinouya pakuita insulating imba ndezvi:
rudzi rwedzimba: pasi pekutanga, penthouse, duplex kana chalet
saizi yeimba, kureva, square metres iyo inayo
imba nzvimbo, ndiko kuti, kana iri pakona yechivako kana kuti pane chivako chakabatana
Furnicha, maragi, uye maketeni zvinobatsirawo kuvhara imba. Zviri pachena kuti kana imba yacho iri itsva uye isati yapfekedzwa nemhando iyi yezvinhu zvekushongedza, kutonhora kunenge kwakaderera. Kunyangwe izvozvo zvichizoenderanawo nerudzi rwekudziisa mumba, chimwe chinhu chatinowanzo funganya nacho mukuwanda kana tikakwanisa. chengetedza pabhiri pakupera kwemwedzi. Uye hazvina kufanana kana iri yepakati yekupisa sisitimu umo kusanganiswa kwekupisa kuchaitwa mumaawa ayo inovhurwa. Nekudaro, kana sisitimu yacho yakasarudzika nemhuri, mhuri yega yega ndiyo ichave yekusarudza tembiricha yakakwana yeimba yavo uye nguva inovatsiva zvakanyanya kuibatidza.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Green Renewables » Simba rekuchengetedza » Kumba Economics » Nzira yekudzivirira sei imba kubva kunotonhora munguva yechando?